China Atọ na-adọ asynchronous moto maka nkume-egweri na ịcha ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-eweta ya | Leadrive
IE1 Atọ nke atọ asynchronous moto
IE2 Atọ nke atọ asynchronous moto
IE3 Atọ nke atọ asynchronous moto
MS Aluminium shei atọ na-adọ asynchronous moto
Russian Standard Motor (Obere Isi High Power)
Atọ-adọ asynchronous moto maka gia reducer
Atọ-adọ asynchronous moto maka anwụrụ mgbapụta
Atọ na-adọ asynchronous moto maka nkume igwe na woodworking ígwè
Mmiri nke okpukpu atọ na-eme ka mmiri dị mma
YB3 Flameproof ato uzo asynchronous moto
YD2 Multi-Stage Agbanwe Agbanwe Agbanwe Atọ-Asynchronous Motor
YEJ2 Electromagnetic Braking Atọ-adọ Asynchronous Motor
YVP mgbanwe ọsọ ọsọ atọ-usoro asynchronous moto
YXP Atọ-adọ asynchronous moto maka elu okpomọkụ ọkụ ọgụ na anwụrụ ọkụ
Jụrụ Tower Motor
YXP usoro elu-okpomọkụ ọkụ-alụ ọgụ iyuzucha fa ...
YEJ2 usoro akpa breeki atọ-adọ asynch ...
Atọ-adọ asynchronous moto maka nkume egweri ihe ...
IE3 usoro ultra-elu arụmọrụ atọ-adọ asynchr ...
IE2 usoro elu arụmọrụ atọ-adọ asynchronous ...
Atọ-adọ asynchronous moto maka nkume-egweri na ịcha
Njirimara nke okpukpu atọ nke asynchronous motor maka egweri nkume na ịcha: obere etiti, ike dị elu, arụmọrụ dị mma nke ọma, ọkwa nchebe dị elu, obere mkpọtụ moto, obere mkpọtụ, siri ike na enweghị mmegharị,
Ezigbo ọrụ, wdg
Atọ-adọ asynchronous Motors maka nkume-egweri na ọnwụ na-igba ígwè shei usoro
Mkpụrụ akwụkwọ.: 71-132
Way ◎zọ Na-arụ Ọrụ: S1
Class Mkpuchi mkpuchi: F.
Level Ọkwa Nchedo: IP56
The network network nke Lijiu Motor agbasala karịrị 20 ógbè na obodo gụnyere Northeast, Northwest, North, Central, South, Southwest na East China. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a na Europe, America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ na mpaghara.
Lijiu Motor bụ ọkachamara na n'ichepụta, R&D na ahịa nke dị iche iche Motors. Ngwaahịa gụnyere YE2, YE3, YB3, jụrụ ụlọ elu Motors, YD2, YEJ2, YVF2, YC / MC, YL na ọtụtụ ndị ọzọ na usoro nke atọ na-adọ asynchronous Motors na dị iche iche ndị ọzọ pụrụ iche pụrụ iche Motors. Ngwaahịa ahụ na-agbaso ụdị ọkọlọtọ mba dị iche iche, yana ọkwa ike yana nha nrụnye na-agbaso ụkpụrụ IEC International Electrotechnical Commission. Ọ nwere uru nke arụmọrụ dị elu na nchekwa nchekwa, mbido mbido dị elu, mkpọtụ dị ala, obere mkpọtụ na ntụkwasị obi dị elu. Ngwaahịa ahụ agafeela asambodo CE nke European Union na asambodo CCC na CQC nke China. The ụlọ ọrụ nwetara ISO9001 mba quality usoro asambodo. Lijiu Motor na-agba mbọ na-enye ihe kasị mma ngwọta maka ulo oru na ike ọrụ, customizing pụrụ iche Motors.
Innovation na iguzosi ike n'ezi ihe bụ echiche m, ime mgbanwe na mgbanwe bụ uru anyị. Ebumnuche anyị ịbụ onye nnọchianya nke "Mere na China" n'ọhịa ụgbọ ala. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke "iji ezi obi na-emeso ma na-emeri na mma". Iji gboo mkpa nke ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ, anyị na-agba mbọ iwulite akara "Lijiu" ma mee ka "Lijiu" bụrụ onye ama ama na mba ahụ na ụwa niile. Jiri iguzosi ike n'ezi ihe anyị na amamihe anyị mee ka echi dị mma n'aka gị!
Nke gara aga: Atọ-asynchronous moto maka pipeline mgbapụta
Osote: Mmiri nke okpukpu atọ na-eme ka mmiri dị mma
YEJ2 usoro akpa breeki atọ-adọ a ...
Atọ-asynchronous moto maka pipeline mgbapụta
IE1 usoro usoro nke ato nke asynchronous
YVP usoro atọ na-adọ asynchronous Motors maka ...
Ogige ianlọ Ọrụ Shangsiqian, Luoyang, Luqiao, Taizhou Zhejiang China